FAQs - cibaaro Trading Co. Development, Ltd.
Hex godka Head Bolt
Machine Ku marooji
Is Ku dhejinta Ku marooji
Is Drilling Ku marooji
drywall Ku marooji
afjary Ku marooji
Wood Ku marooji
Hex godka Ku marooji
set Ku marooji
Furniture Ku marooji
barroosinka Ku marooji
Eye Ku marooji
Ilkaha Lock dhaqe
Xoog High Steel sitemapSii
titanium qaybood ah
titanium Ku marooji
Qaybo ka jediyay
Qaybo ka Machine
Inyar gaardi waayo, la taaban karo
DIN338 HSS Shank toosan Inyar marooji
Taxanaha ah oo gaardi xoorta
Ahama Steel Wire Xarig
Galvanized Wire Xarig
Qiimaha Our ku xiran yihiin isbedel ku xiran tahay arrimo kale oo suuqa sahayda iyo. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated ka dib markii shirkadda noo soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma leedahay tiro si ugu yaraan?
Haa, waxaan u baahan tahay oo dhan amarada caalamka in ay leedahay tirada ugu yar ee si joogto ah. Haddii aad raadinayso in ay iibin laakiin tiro badan oo yar yar, waxaan ku talinaynaa in aad baadhid our website
Haa, waxaan ku siin karaan warqadaha ugu oo ay ku jiraan Certificates of Falanqaynta / waafaqsan; Caymis; Asal ahaan, iyo waraaqaha kale ee loo dhoofiyo meesha looga baahan yahay.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan tahay 7 maalmood. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag deebaaji ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii times our hogaanka ha la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Waa maxay damaanad sheyga?
Waxaan damaanad qalab iyo sanco our. Waxaa naga go'an waa in aad ku qanacsan tahay la waxyaabaha our. In damaanad ama aan, waa dhaqanka ee Shirkadda cinwaanka iyo xaliyo arrimaha macaamiisha oo dhan inay ku qanacsan tahay qof
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalaan baakada dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaali takhasusay xirxirida halista alaabta khatarta ah iyo ansixiyey wax rarta, kaydinta qabow heerkulka waxyaabaha xasaasiga ah. Baakadaha Specialist iyo shuruudaha lagu cabayn aan caadiga ahayn la kulmeyso laga yaabaa in lacag dheeraad ah.
Qiimaha maraakiibta ku xiran tahay sida aad doorato in aad hesho alaabta. Express sida caadiga ah waa ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. By seafreight waa xalka ugu fiican xaddi weyn. Sida saxda ah heerka xamuulka waxaannu kugu siin karaa oo kaliya haddii aan ogaan faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo jidka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Cibaaro Trading Co. Development, Ltd /
© Copyright - 2010-2019: Rights Reserved All. Hot Products , Sitemap , amp Mobile
Countersunk Head Wood Screw, Pan Head Ku marooji Iyadoo Collar , Pan Head Self Drilling Ku marooji , Godka Head Machine Ku marooji, Is Drilling boolal la taaban karo, Naxaas gool Set boolal,